RescuePRO® Deluxe | Data Recovery
နေအိမ် → RescuePRO® Deluxe
2. သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီကြောင်းကိုသင်၏ရှေးခယျြသောကူပွန်အောက်ကခလုတ်တဦးကိုရှေးခယျြ ကျေးဇူးပြု..3. အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ် ကျေးဇူးပြု. LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် သင့်ရဲ့ RPRID serial number ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရယူပေါ်တွင်သင်၏ညွှန်ကြားချက်.
If you receivedacoupon with your SanDisk® forafree2SSD ကိုများအတွက် RescuePRO Deluxe ၏တစ်နှစ် activation, SSD ကိုဆော့ဖ်ဝဲRescuePRO® Deluxe သင့်ရဲ့အခမဲ့ 2-တစ်နှစ် activation တည်ဆောက်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့အောက်ကလမ်းညွန်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ:
1. အောက်တွင်သင်သည်သင်၏ SanDisk SSD ကိုနှင့်အတူလက်ခံရရှိသည့်ကူပွန်ကိုရှေးခယျြကျေးဇူးပြုပြီး.
>>>>သဲလွန်စ: သင့်ရဲ့ကူပွန် SSD ကိုများအတွက်RescuePRO® Deluxe ပြောပါလိမ့်မယ်.
ဒီဆော့ဗ်ဝဲ SSD ကိုရဲ့အဘို့ဖြစ်၏ (solid state drive).
flash ကိုမီဒီယာများအတွက်, ထိုကဲ့သို့သော SD ကဒ်များအဖြစ်, သော microSD ကတ်တွေ, USB drive တွေကို, ဒီစာမျက်နှာရဲ့ထိပ်မှာRescuePRO® Deluxe ကိုရှေးခယျြ.
2. သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီကြောင်းကိုသင်၏ရှေးခယျြသောကူပွန်အောက်ကခလုတ်တဦးကိုရှေးခယျြ ကျေးဇူးပြု..3. အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ် ကျေးဇူးပြု. LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် သင့်ရဲ့ RPSSD serial number ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရယူပေါ်တွင်သင်၏ညွှန်ကြားချက်.** ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: Should you haveacoupon for RescuePro Deluxe for SSD withaserial number that begins with RPDLX-00602,
you should contact SanDisk at http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/foracorrect serial number.
သင့်ရဲ့ကူပွန်အပေါ်ပုံနှိပ်ကြောင်းအဆိုပါနံပါတ်စဉ်မမှန်ကန်.ဒါဟာ RPSSD နဲ့စတင်သင့်တယ်You will then need to provide your complete RPDLX-0602 တစ်ဦးကိုအစားထိုးလက်ခံရရှိရန် SanDisk မှနံပါတ်စဉ်. **SSD ကိုများအတွက်RescuePRO® Deluxe
Windows ကို Software များ mac အတွက်ဆော့ဝဲ
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်, အောက်ကခလုတ်မှသင်၏ operating system ကိုရွေးချယ်သင့် operating system များအတွက်ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျပုံစံမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကျေးဇူးပြုပြီး. ဒါမှမဟုတ်တနည်း, ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ (အမေရိကန်) toll-free (866) 603-2195, သို့မဟုတ်ဒေသအလိုက် (727) 449-0891. ဥရောပခေါ်ဆိုမှု +44 (0)115 704 3306